Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Vaksinin'ny ADN COVID-19 voalohany manerantany nankatoavina tany India
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao Mafana India • Vaovao • Safety • teknolojia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny vaksininy, ZyCoV-D, dia mampiasa ampahany amin'ny akora fototarazo avy amin'ny viriosy izay manome torolàlana ho an'ny ADN na RNA mba hanaovana ny proteinina manokana izay eken'ny hery fiarovan'ny vatana sy valiany.
Nanaiky ny vaksinin'ny coronavirus vaovao i India.
Fankatoavana azo ampiasaina amin'ny olon-dehibe sy ankizy 12 na antitra.
India dia mikendry ny hanao vaksiny ny olon-dehibe afaka alohan'ny Desambra, 2021.
Nahazo alalana avy amin'ny Central Drugs Standard Control Organisation of the Government of India (CDSCO) ny ADN voalohany nitifirany ny virus COVID-19, satria mbola miady amin'ny fifehezana ny viriosy any amin'ny fanjakana sasany ny firenena.
The CDSCO nekena ny fampiasana maika ho an'ny olon-dehibe sy ny ankizy 12 taona no ho miakatra.
Ny fankatoavana dia hanome ny fitifirana voalohany ho an'ireo latsaky ny 18 taona, ary hanome tosika ny Indiaprograma fanaovana vaksiny, izay mikendry ny hanome vaksiny ny olon-dehibe karana mendrika rehetra amin'ny Desambra, 2021.
Tsy toy ny ankamaroan'ny vaksinin'ny coronavirus, izay mila fatra roa na fatra tokana aza, ZyCoV-D dia atolotra amin'ny fatra telo.
Ilay mpamokatra fanafody mahazatra, voatanisa ao amin'ny Cadila Healthcare Ltd, dia mikendry ny hahazo 100 tapitrisa hatramin'ny 120 tapitrisa fatra ZyCoV-D isan-taona ary efa nanomboka nitahiry ny vaksininy.
Ny vaksinin'i Zydus Cadila, novolavolaina niaraka tamin'ny Departemantan'ny Bioteknolojia, no fitifirana faharoa nahazoana alalana vonjy maika tany India taorian'ny Covaxin an'i Bharat Biotech.
Nilaza ilay mpanao fanafody tamin'ny volana jolay fa ny vaksininy COVID-19 dia nandaitra tamin'ny mutants coronavirus vaovao, indrindra ny Delta variant, ary ny fitifirana dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny mpampihatra tsy misy fanjaitra mifanohitra amin'ny syringes nentin-drazana.
Ny orinasa dia nangataka fahazoan-dàlana ho an'ny ZyCoV-D tamin'ny 1 Jolay, mifototra amin'ny taha 66.6 isanjaton'ny fahombiazana amin'ny fitsapana farany an'ireo mpilatsaka an-tsitrapo maherin'ny 28,000 manerana ny firenena.